Ahoana ny fomba hahafantarana ray aman-dreny misy poizina | Bezzia
Ahoana no ahalalana ray aman-dreny misy poizina
Maria Jose Roldan | | Ampianaro ny ankizy
Mahalana ny mahita ray aman-dreny izay manaiky fa poizina ho an'ny zanany izany ary ny fitaizana omena dia tsy ampy. Ny maha ray aman-dreny tsara dia miankina betsaka amin'ny soatoavina nomena ny zanakao nandritra ny fanabeazana ny zaza. Ny raim-pianakaviana dia tsy maintsy manampy ny zanany hanana toetra marina sy fitondran-tena mety.
Raha tsy izany dia mety tsy mandeha tsara mihitsy ilay ray aman-dreny ary raisina ho toy ny ray aman-dreny misy poizina. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia manome an-tsipiriany izahay ny toetra fantatra amin'ny anarana hoe ray aman-dreny misy poizina matetika ary ny fomba fanamboarana azy ka ny fizotran'ny fitaizana no mety indrindra.
2 Mitsikera loatra
3 feno fitiavan-tena
4 tsy refesi-mandidy
5 Nanery ny fandinihana izy ireo
6 Ratsy sy tsy faly amin'izao tontolo izao
Ny fiarovana loatra dia iray amin'ireo toetra mazava sy miharihary indrindra amin'ny ray aman-dreny misy poizina. Ny zaza dia tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ny hadisoana vitany satria io dia hanampy azy hamolavola tsikelikely ny toetrany. Ny fiarovana tafahoatra avy amin'ny ray aman-dreny dia tsy tsara amin'ny fampandrosoana ny zaza.
Tsy misy ilana azy ny manala baraka sy mitsikera ny ankizy amin'ny fotoana rehetra. Miaraka amin'izany dia simba tsikelikely ny fahatokisan-tena sy ny fahatokisan-tenan'ny ankizy. Ny tsara indrindra dia arahaba arahaba izy ireo amin'ny zava-bitany sy ny tanjony. Ny fitsikerana ataon'ny ray aman-dreny dia mamela ny ankizy ho mpiaro amin'ny fotoana rehetra ary mahatsapa fa tsy misy ilana azy amin'ny zavatra rehetra ataony.
Ny ray aman-dreny misy poizina dia matetika no tia tena amin'ny zanany. Tsy manome lanja ireo filàna samihafa ananan'ny ankizy izy ireo fa ny tenany ihany no eritreretiny. Ny fitiavan-tena dia misy fiantraikany ratsy amin'ny toe-panahin'ny zaza ary mety hiteraka fanahiana sy fahaketrahana avo lenta.
Ny fahefana mihoa-pampana dia iray amin'ireo toetra mampiavaka ny ray aman-dreny misy poizina. Tsy mora miovaova amin'ny fitondran-tenan'ny zanany izy ireo ary mametraka ny fahefany amin'ny fotoana rehetra, izay miteraka fahatsapana ho meloka amin'ny ankizy. Rehefa mandeha ny fotoana dia lasa olon-dehibe manana olana ara-pihetseham-po maro ireo ankizy ireo misy fiatraikany ratsy amin'ny fiainanao isan'andro izany.
Nanery ny fandinihana izy ireo
Tsy azonao atao ny manery ny ankizy handalina zavatra tsy tiany. Betsaka ny ray aman-dreny manery ny zanany hisafidy asa iray nefa tsy mihevitra izay tena tadiaviny.
Ratsy sy tsy faly amin'izao tontolo izao
Ny ray aman-dreny misy poizina dia tsy faly amin'ny fotoana rehetra ary tsy faly amin'ny fiainany. Ity tsy fitoviana sy pessimism ity dia raisin'ireo ankizy amin'ny zava-dratsy rehetra aterak'izany. Rehefa mandeha ny fotoana dia manjary ankizy malahelo sy tsy faly izy ireo izay tsy afa-po amin'ny zavatra rehetra.
Farany, ny poizina ananan'ny ray aman-dreny dia voan'ny zaza, zavatra tanteraka rehefa tonga eo amin'ny sehatry ny olon-dehibe ianao. Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mitaiza ny zanany amin'ny fiheverana andiana soatoavina toy ny fanajana na ny fitiavana mba hahazoana antoka fa olona tsara izy ireo amin'ny fotoana maharitra. Zava-dehibe ny fahafahan'ny ankizy mivelatra tanteraka ary tsy mametra azy ireo amin'ny fomba manararaotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Ahoana no ahalalana ray aman-dreny misy poizina
Tena ilaina hamoronana trano fanasan-damba ao an-trano